အတှေးတှကေို ဂရုစိုကျပါ – Shinyoon
အတိတျကို ပွနျပွနျပွေးပွီး နာစရာတှခေညျြးပဲ ပွနျပွနျအမှတျရနတေတျတဲ့လူ့အကငျြ့ကလဲ ခကျတယျ ။ ကိုယျ ဘယျတုနျးက ဘယျလိုပြျောခဲ့ ကွညျနူးခဲ့ရတာဆိုတဲ့ အမှတျတရတှေ ကိုယျနာခဲ့ ကိုယျခံခဲ့ရတဲ့ နာကငျြမှုတှလေောကျသာ ပိုပွီး သတိရတတျကွတယျလေ ။
အဆငျမပွတေဲ့အရာလေး တဈစကို ဆှဲထုတျပွီး မနကျက နဲနဲလေးအဆငျမပွတေဲ့အရာကို တဈရကျလုံး ဆကျတှေးပွီး တဈနလေုံ့းကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဒုက်ခပေးတတျတာလဲ ခကျတယျ ။ တဈယောကျတညျးနတေဲ့အခါ အတှေးတှကေို ဂရုစိုကျပါဆိုတာမြိုးက . . . တကယျ အရေးကွီးလို့ ပွောတာပါ ။ လူအမြားကွီးနဲ့ အဆငျပွအေောငျနဖေို့ခကျတယျဆိုတာထကျ ကိုယျတဈယောကျတညျး ကိုယျ့အတှေးနဲ့ကိုယျ ပြျောအောငျမနတေတျတာက ပိုပွီး ခကျပါတယျ ။
စိတျဓာတျကတြာတှေ ၀မျးနညျးအားငယျတာတှေ စတဲ့ အတှေးတှကေ ကိုယျတဈယောကျတညျး ရှိတဲ့အခါ ခေါငျးထဲ ပိုပွီး ၀ငျလာတတျတာမြိုးလေ ။ တဈခါတဈရံ ဘာအကွောငျးပွခကျြမှ မရှိပဲ ၀မျးနညျးနတောမြိုး ပွီးတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ရညျမှနျးခကျြ ပြောကျနတောမြိုးတှေ ခံစားလာရတဲ့အခါ . . . အတှေးတှကေို ပိုပွီး ဂရုစိုကျဖို့လိုနတောမှနျး ကိုယျကိုယျတိုငျ သတိပွုမိဖို့လိုတယျ ။
ဖွဈနိုငျရငျတော့ ဘာမှ မတှေးနဲ့ ။ တကယျလို့ တှေးမိခဲ့ရငျတောငျ Nagative တှခေညျြး မတှေးမိဖို့ လိုလိမျ့မယျ ။ လူဆိုတာကလဲ ခကျတယျ ကိုယျပြျောခဲ့ ကွညျနူးခဲ့ဖူးတဲ့ အခြိနျတှထေကျ ကိုယျနာကငျြခဲ့ရတဲ့ အတိတျတှကေိုပဲ ပိုပွီးအမှတျရနတေတျတာမြိုးလေ ။
ငါ ဘယျတုနျးက ဘယျသူနဲ့ ပြျောခဲ့တာဆိုတာမြိုး ငါ ဘယျသူနဲ့ ဘယျလို ပြျောအောငျနမေယျဆိုတဲ့ အတှေးမြိုးတှထေကျ ဘယျသူက ငါ့ကို ဘယျလို နာကငျြအောငျလုပျခဲ့တာ အဲ့တုနျးက သူက ဘယျလိုစကားလုံးမြိုးတှေ လုပျရပျမြိုးတှနေဲ့ နာကငျြစခေဲ့တာဆိုတဲ့ nagative ခညျြးတှကေိုပဲ ပွနျပွီး သတိရနတေတျတာလေ ။ ပုဆိနျက မပေ့မေယျ့ သဈပငျကတော့ ဘယျမပေ့ါ့မလဲဆိုတဲ့စကားနဲ့ ပွနျခပြေဖို့တှေးတဲ့အခါ ကိုယျကိုယျတိုငျက . . . သဈပငျတဈပငျမဟုတျပဲ သကျရှိတဈယောကျမှနျး ပွနျပွီး အမှတျရနဖေို့လိုတယျ ။
စိတျက လူက ဆောငျတာမြိုးလေ ။ အဲ့တာကိုတကယျ လကျခံယုံကွညျတယျဆိုရငျ . . .အမြားနဲ့ နတေဲ့အခါ စကားတှကေို ဂရုစိုကျရသလို တဈယောကျတညျးနတေဲ့အခါ အတှေးတှကေို ဂရုစိုကျဖို့ လိုတယျ ။
တစ်ယောက်တည်း နေတဲ့အခါ . . . အတွေးတွေကို ဂရုစိုက်ပါ
အတိတ်ကို ပြန်ပြန်ပြေးပြီး နာစရာတွေချည်းပဲ ပြန်ပြန်အမှတ်ရနေတတ်တဲ့လူ့အကျင့်ကလဲ ခက်တယ် ။ ကိုယ် ဘယ်တုန်းက ဘယ်လိုပျော်ခဲ့ ကြည်နူးခဲ့ရတာဆိုတဲ့ အမှတ်တရတွေ ကိုယ်နာခဲ့ ကိုယ်ခံခဲ့ရတဲ့ နာကျင်မှုတွေလောက်သာ ပိုပြီး သတိရတတ်ကြတယ်လေ ။
အဆင်မပြေတဲ့အရာလေး တစ်စကို ဆွဲထုတ်ပြီး မနက်က နဲနဲလေးအဆင်မပြေတဲ့အရာကို တစ်ရက်လုံး ဆက်တွေးပြီး တစ်နေ့လုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဒုက္ခပေးတတ်တာလဲ ခက်တယ် ။ တစ်ယောက်တည်းနေတဲ့အခါ အတွေးတွေကို ဂရုစိုက်ပါဆိုတာမျိုးက . . . တကယ် အရေးကြီးလို့ ပြောတာပါ ။ လူအများကြီးနဲ့ အဆင်ပြေအောင်နေဖို့ခက်တယ်ဆိုတာထက် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ပျော်အောင်မနေတတ်တာက ပိုပြီး ခက်ပါတယ် ။
စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေ ၀မ်းနည်းအားငယ်တာတွေ စတဲ့ အတွေးတွေက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ရှိတဲ့အခါ ခေါင်းထဲ ပိုပြီး ၀င်လာတတ်တာမျိုးလေ ။ တစ်ခါတစ်ရံ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မရှိပဲ ၀မ်းနည်းနေတာမျိုး ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရည်မှန်းချက် ပျောက်နေတာမျိုးတွေ ခံစားလာရတဲ့အခါ . . . အတွေးတွေကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်ဖို့လိုနေတာမှန်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သတိပြုမိဖို့လိုတယ် ။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ဘာမှ မတွေးနဲ့ ။ တကယ်လို့ တွေးမိခဲ့ရင်တောင် Nagative တွေချည်း မတွေးမိဖို့ လိုလိမ့်မယ် ။ လူဆိုတာကလဲ ခက်တယ် ကိုယ်ပျော်ခဲ့ ကြည်နူးခဲ့ဖူးတဲ့ အချိန်တွေထက် ကိုယ်နာကျင်ခဲ့ရတဲ့ အတိတ်တွေကိုပဲ ပိုပြီးအမှတ်ရနေတတ်တာမျိုးလေ ။
ငါ ဘယ်တုန်းက ဘယ်သူနဲ့ ပျော်ခဲ့တာဆိုတာမျိုး ငါ ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်လို ပျော်အောင်နေမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေထက် ဘယ်သူက ငါ့ကို ဘယ်လို နာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့တာ အဲ့တုန်းက သူက ဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးတွေ လုပ်ရပ်မျိုးတွေနဲ့ နာကျင်စေခဲ့တာဆိုတဲ့ nagative ချည်းတွေကိုပဲ ပြန်ပြီး သတိရနေတတ်တာလေ ။ ပုဆိန်က မေ့ပေမယ့် သစ်ပင်ကတော့ ဘယ်မေ့ပါ့မလဲဆိုတဲ့စကားနဲ့ ပြန်ချေပဖို့တွေးတဲ့အခါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က . . . သစ်ပင်တစ်ပင်မဟုတ်ပဲ သက်ရှိတစ်ယောက်မှန်း ပြန်ပြီး အမှတ်ရနေဖို့လိုတယ် ။
စိတ်က လူက ဆောင်တာမျိုးလေ ။ အဲ့တာကိုတကယ် လက်ခံယုံကြည်တယ်ဆိုရင် . . .အများနဲ့ နေတဲ့အခါ စကားတွေကို ဂရုစိုက်ရသလို တစ်ယောက်တည်းနေတဲ့အခါ အတွေးတွေကို ဂရုစိုက်ဖို့ လိုတယ် ။